ምሳሌ 13 NASV – Mmɛbusɛm 13 ASCB | Biblica
ምሳሌ 13 NASV – Mmɛbusɛm 13 ASCB
1Ɔba nyansafoɔ tie nʼagya nkyerɛkyerɛ;
na ɔfɛdifoɔ ntie animka.
2Nneɛma pa a ɛfiri onipa anom no ma no anigyeɛ,
na wɔn a wɔnni nokorɛ no kɔn dɔ basabasayɛ.
3Deɛ ɔkora nʼano no kora ne nkwa so,
nanso deɛ ɔkasa a ɔnsusu ho no bɛba ɔsɛeɛ mu.
4Onihafoɔ pere hwehwɛ nanso ɔnnya hwee,
na deɛ ɔyɛ adwuma no nya deɛ ɔpɛ biara.
5Teneneefoɔ kyiri deɛ ɛnyɛ nokorɛ,
nanso amumuyɛfoɔ de aniwuo ne ahohora ba.
6Tenenee bɔ ɔnokwafoɔ ho ban,
na amumuyɛsɛm tu ɔbɔnefoɔ gu.
7Obi yɛ ne ho sɛ ɔdefoɔ, a nso ɔnni hwee,
ɔfoforɔ yɛ ne ho sɛ ohiani, a nso ɔwɔ ahonya bebree.
8Obi ahonya bɛtumi agye no nkwa,
nanso ohiani nte ahunahuna biara.
9Teneneefoɔ kanea hyerɛn pa ara,
nanso wɔdum amumuyɛfoɔ kanea.
10Ahantan de ntɔkwa nko ara na ɛba,
na wɔhunu nyansa wɔ wɔn a wɔtie afutuo mu.
11Ahonya a ɛnam kwammɔne soɔ no hwere ntɛm so,
na deɛ ɔboa sika ano nkakrankakra no ma ɛdɔɔso.
12Anidasoɔ a wɔtu hyɛ da no bɔ akoma yadeɛ,
nanso anigyinadeɛ a nsa aka no yɛ nkwa dua.
13Deɛ ɔtwiri ahyɛdeɛ no bɛtua so ka,
nanso deɛ ɔde obuo ma mmara no, wɔma no akatua.
14Onyansafoɔ nkyerɛkyerɛ te sɛ nkwa asutire,
15Nhunumu pa de adom ba,
nanso atorofoɔ ɛkwan so yɛ den.
16Ɔbadwemma biara yɛ nʼadeɛ wɔ nimdeɛ mu,
nanso ɔkwasea da nʼagyimisɛm adi.
17Ɔsomafoɔ mumuyɛfoɔ tɔ amaneɛ mu,
nanso ɔnanmusini nokwafoɔ de abodwoɔ ba.
18Deɛ ɔpo ntenesoɔ no kɔ ohia ne animguaseɛ mu,
na deɛ ɔtie ntenesoɔ no, wɔhyɛ no animuonyam.
19Akɔnnɔdeɛ a nsa aka ma ɔkra ani gye,
nanso nkwaseafoɔ kyiri sɛ wɔtwe wɔn ho firi bɔne ho.
20Deɛ ɔne onyansafoɔ nante no hunu nyansa,
na deɛ ɔne nkwaseafoɔ bɔ no hunu amane.
21Ɔhaw di ɔbɔnefoɔ akyi,
na nkɔsoɔ yɛ teneneeni akatua.
22Onipa pa de agyapadeɛ gya ne nananom,
na wɔkora ɔbɔnefoɔ ahonyadeɛ so ma ɔteneneeni.
23Ohiani afuom nnɔbaeɛ tumi ba pii,
nanso ntɛnkyea pra kɔ.
24Deɛ ɔkyɛe nʼabaa so no tane ne ba,
na deɛ ɔdɔ no no hwɛ sɛ ɔbɛtene no.
25Teneneefoɔ didi ma wɔn akoma mee
nanso, ɛkɔm de amumuyɛfoɔ.
ASCB : Mmɛbusɛm 13